News 18 Nepal || नेपालको ओडिआई र टि-२० वरियतामा सुधार, कति औं स्थानमा पुग्यो ?
नेपालको ओडिआई र टि-२० वरियतामा सुधार, कति औं स्थानमा पुग्यो ?
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को वार्षिक ओडिआई र टि-२० आई वरियतामा नेपालले सुधार गरेको छ । आइसिसीले सोमबार जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले ओडिआई र टि-२० आई दुबैमा एक एक स्थान सुधार गरेको हो ।
नेपाल टि-२० आई वरियतामा १३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । टि२० आई वरियतामा नेपाल एसियोसियट टोलीमा शीर्षस्थानमा छ । अघिल्लो हप्ता नेपालले मलेसिया र नेदरल्यान्ड्ससँगको टि-२० आई त्रिकोणात्मक सिरिज जित्दै १४ औं स्थानमा रहेको थियो ।
नेपाल भन्दा पछि टि-२० आई वरियतामा स्कटल्यान्ड १४, यूएई १५, पपुवा न्युगिनी १६ र नेदरल्यान्ड्स १७ औं स्थानमा छन् । नेपालको १९ खेलमा ३ हजार ५ सय ५६ अंक छ । रेटिङ अंक १ सय ८७ छ ।
टि-२० वरियतामा इंग्ल्यान्ड शीर्ष, भारत दोस्रो, न्युजिल्यान्ड तेस्रो र पाकिस्तान चौथो स्थानमा छ । नेपाल भन्दाअघि आयरल्यान्ड १२, जिम्बावे ११ र वेस्टइन्डिज १० औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै नेपालले ओडिआई वरियतामा एक स्थान सुधार गर्दै १६ औं स्थानमा उक्लिएको छ । नेपाल उक्लिदा यूएई १७ औं स्थानमा झरेको छ । स्कटल्यान्ड १५, ओमान १४ र जिम्बावे १३ औं स्थानमा छ । आयरल्यान्ड्स १२ र नेदरल्यान्ड्स ११ औं स्थानमा छन् ।
ओडिआई वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्षक्रममा उक्लिएको छ । अष्ट्रेलिया दोस्रो, भारत तेस्रो र इंग्ल्यान्ड चौथो स्थानमा छन् । आइसिसीले वार्षिक वरियता २०१८/१९ तथा २०१९/२० को नतिजालाई ५० प्रतिशत आधार मान्ने गर्दछ । २०२० को नतिजालाई शत प्रतिशत आधार मान्ने गर्दछ ।
आईसीसीको उत्कृष्ट खेलाडीमा कुशल भुर्तेल मनोनयन, यसरी भोट गर्न सकिने
च्याम्पियन्स लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले रच्यो इतिहास, पिएसजी पराजित
खेलाडीहरू संक्रमित हुन थालेपछि आईपीएल स्थगित
तीन खेलाडीमा कोरोना पुष्टि भएपछि आईपीएल स्थागित !
वार्नरलाई कप्तानबाट किन हटाइयो ? यस्तो रहेछ खास रहस्य
पोलार्डको आँधीमा उड्यो चेन्नई, रोमाञ्चक खेलमा मुम्बई विजयी
आउँदो एकदिवसीय विश्वकपमा १४ टिम हुने, नेपालले पाउँला मौका ?
हैदराबादका नयाँ कप्तान बने केन विलियम्सन